नेपाली चलचित्र क्षेत्र कति भासियो, कसरी उठ्ला ? Canada Nepal
Nov 29 2020 | २०७७, मंसिर १४गते
२०७७, मंसिर १४गते
गोकुल बाँस्कोटाले भने - नेत्रविक्रम चन्दको ‘क्रान्ति’मा भ्वाङ परेको छ
योगेश भट्टराईले भने - नेकपामा विवाद बढ्दा भूतप्रेतहरु सल्बलाउन थाले
पार्टीका आयातित झण्डा बोक्नेहरू जनता हुने तर देशको राष्ट्रिय झण्डा बोक्नेहरू दलाल हुने चाहिँ कसरी हुन्छ र ?
‘कुरा काट्ने मान्छेले काटुन्’ का गायक सुवासको गीतमा दीपक र उषाको अभिनय
बलिउडमा प्रबेश गर्दै साउथ स्टार साईं श्रीनिवास
बहस र छलफलले पार्टीमा गति पैदा गर्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ
अमेरिकामा एक नेपाली डाक्टरको ज्यान गयो
नेपाली चलचित्र क्षेत्र कति भासियो, कसरी उठ्ला ?
क्यानाडानेपाल कार्तिक १५ २०७७
बीबीसी। कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि भन्दै देशव्यापी लकडाउन लागु गरिएपछि सानो, ठूलो स्तरमा अन्य विभिन्न क्षेत्र खुल्न थाले पनि अझै नखुलेको र अन्योलमा रहेको नेपाली चलचित्र क्षेत्र हो।
करिब चार महिनाको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञा खुले पनि अझै न सिनेमाघरहरू खुलेका छन्, न नै चलचित्रको छायाङ्कन हुन सकेको छ। म्युजिक भिडिओ र सानो पर्दाका टेलिफिल्महरूको छायाङ्कन तथा निर्माण केही हुन थालेपनि ठूला चलचित्रहरूको छायाङ्कन र निर्माण अझै सुरु भएको छैन।
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेर चलचित्र निर्माण हुन थाल्यो भने पनि दर्शकहरू पहिले जस्तै चलचित्र हेर्न हलमै जाने अवस्था नरहेको चलचित्र निर्देशक तथा निर्माताहरू बताउँछन्। चलचित्र क्षेत्रको लगानी उठाउने एकल माध्यम सिनेमा घरसम्म दर्शक पुर्‍याउन र महामारीका माझ चलचित्रको गुणस्तर वृद्धि गर्दै लैजान अब के गर्नुपर्छ?
चलचित्र निर्माता तथा नायिका केकी अधिकारी र निर्देशक तथा चलचित्र समीक्षक दीपेन्द्र लामासँग साप्ताहिक 'बीबीसी बहस' मा गरिएको एक छलफल सुन्न माथिको तस्बिरमा रहेको प्ले बटन थिच्नुहोस्।
कार्तिक १५, २०७७ शनिवार १३:१६:३३ बजे : प्रकाशित
# कसरी उठ्ला
प्रदेश प्रमुख अधिकारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं - प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई कोरोनाभाइरसको सक्रमण पुष्टि भएको छ । उनलाई गए राति कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
उनले शुक्रबार दिउँसो नै प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा स्वाब दिएका थिए । कोरोना पुष्टि भएका प्रदेश प्रमुख अधिकारीलाई सामान्य लक्षण देखिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश प्रमुख अधिकारीकी धर्मपत्नी र सशस्त्र प्रहरीका एक सुरक्षाकर्मीलाई पनि संक्रमण देखिएको उनका प्रेस सल्लाहकार खेमराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
मंसिर १३, २०७७ शनिवार १७:४७:४४ बजे : प्रकाशित
भारतीय विदेश सचिवको खोप कूटनीतिको अर्थ के
भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगलाको शुक्रवार सम्पन्न दुई दिने भ्रमणमार्फत्‌ नयाँ दिल्लीले नेपालसँगको सम्बन्ध थप गहिरो बनाउन खोप कूटनीति अघि बढाएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
एउटा सार्वजनिक प्रवचन कार्यक्रममा बोल्दै शुक्रवार भारतीय विदेश सचिवले विश्वकै ठूलो खोप उत्पादकका हिसाबले कोरोनाभाइरसको खोप बाहिर ल्याउने प्रयासमा भारत अघि रहेको बताए।
“हामीसँग कम्तीमा पाँचवटा खोप परीक्षणको उपल्लो तहमा छन्। भारतका दर्जनौँ स्थानमा सबै उमेर र सामाजिक समूहमा खोपको परीक्षण भइरहेको छ। म नेपालका नागरिकहरूलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने खोप आउनासाथ नेपालको माग पूरा गर्ने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नेछ।”
नेपाल र भारतका मानिसहरूको आनुवंशिक चरित्रका कारण भारतमा काम गर्ने खोपले नेपालमा पनि काम गर्ने उल्लेख गर्दै महामारीबाट दुई देशले मिलेर पार पाउने धारणा उनले राखे।
उनको भनाई किन अर्थपूर्ण?
शुरूमा भारत र त्यसपछि नेपालले जारी गरेका राजनीतिक नक्साका कारण लगभग एक वर्ष झण्डै संवादहीनताको तहमा पुगेको नेपाल-भारत सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा फर्काउने उद्देश्यसहित आएका भारतीय विदेश सचिवले कोभिड सहकार्यबारे राखेको धारणालाई विश्लेषकहरूले अर्थपूर्ण मानेका छन्।
भूराजनीतिक मामिलामा कलम चलाउने पत्रकार अखिलेश उपाध्याय भन्छन्, “विदेश सचिव श्रृंगलाले नेपाललाई भारतले आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र विकास साझेदारका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यसलाई बढिरहेको नेपाल-चीन सम्बन्धसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। दिल्लीले हामीलाई मिलेर अघि बढौँ, हाम्रो गन्तव्य जोडिएको छ भनेर सन्देश दिन खोजिरहेको छ।"
खोपबारे सार्वजनिक मञ्चबाट बोलेर भारतीय विदेश सचिवले सरकारको तहमा मात्रै नभई जनताको तहमा नै खोप विकासमा सफलता प्राप्त भएपछि नेपाललाई पनि सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ।
“विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता देशको तर्फबाट त्यसरी आश्वस्त पारिनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। भारतले सस्तोमा खोप बनाउँछ। त्यहाँबाट खोप ल्याउन भूगोल लगायत सबै कुराले हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। हामीले नजिकको तीर्थलाई हेला गर्नु हुँदैन।”
पत्रकार उपाध्यायले समाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अहिलेका लागि नेपाल र भारतले खोपको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
भारतको प्रमुख खोप निर्मता कम्पनीबारे विश्वको चासो
विश्वप्रतिष्ठित अक्सफर्ड विश्वविद्यालय सँगको साझेदारीमा औषधि कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले बनाइरहेको कोभिड-१९ विरूद्धको खोप सिरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाले बनाइरहेको छ।
परीक्षण क्रममा उक्त खोपले ७० प्रतिशत मानिसमा कोभिड-१९ को लक्षण देखा पर्न नदिने पाइएको थियो।
सुरक्षाका हिसाबले फाइजर र मोडेर्ना कम्पनीले बनाएका अलगअलग खोपले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सकारात्मक परिणाम दिनसक्ने भनिए पनि ती खोप भण्डारणका लागि चाहिने अत्यधिक चिसो तापक्रम व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली नेपालसहित कैयौँ देशमा उपलब्ध नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
एस्ट्राजेनेकाको खोप धेरै सस्तो हुने, सजिलै भण्डारण गर्न सकिने र संसारमा जहाँ पनि सहज रूपमा लैजान सकिने बताइएको छ।
बीबीसी न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा सिरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदर पुनावालाले सन् २०२१ को अन्त्यसम्म एक अर्ब खोपको मात्रा विकास गरिसक्ने बताएका छन्।
उनका भनाईमा प्रयोगका लागि स्वीकृति नै नपाउँदै अहिले नै भारतमा चार करोड मात्रा खोप बनाएर भण्डारण गरिएको छ र नियामक निकायले ज्यानुअरी वा फेब्रुअरीमा अनुमोदन दिएसँगै मासिक रूपमा १० करोड खोपहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।यो समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो । फणीन्द्र दाहाल, बीबीसी न्यूज नेपाली
मंसिर १३, २०७७ शनिवार १७:०६:०६ बजे : प्रकाशित
# भारतीय विदेश सचिव
नेपालमा एकैदिन ५ सय १५ जनाले जिते कोरोना
काठमाडौं - नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ५ सय १५ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्।
शनिवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५ सय १५ जनाले कोरोनालाई जितेको जानकारी दिएको हो । यससँगै नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या २ लाख ११ हजार १ सय ८६ पुगेको छ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १३ सय ८० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमित संख्या २ लाख ३० हजार ७ सय २३ पुगेको छ।
यसैबीच पछिल्लो २४ घण्टामा १९ जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । योसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार ४ सय ५४ जना पुगेको छ ।
मंसिर १३, २०७७ शनिवार १६:४८:२४ बजे : प्रकाशित
नेपालमा एकैदिन १३ सय ८० जनामा कोरोना संक्रमण, १९ जनाले ज्यान गुमाए
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा १३ सय ८० जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ९ हजार ३ सय ६८ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा शनिवार थप १३ सय ८० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
अब सक्रिय संक्रमितको संख्या १८ हजार ८३ जना पुगेको छ । यससँगै कुल कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ३० हजार ७ सय २३ पुगेको छ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५ सय १५ जनाले कोरोनालाई जितेका छन् । यससँगै नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या २ लाख ११ हजार १ सय ८६ पुगेको छ।
मंसिर १३, २०७७ शनिवार १६:३१:१८ बजे : प्रकाशित
नेपालमा कोरोना खोप कहिलेसम्म आउला ? प्राथमिकता सूचीमा को ?
कोरोनाभाइरसको खोप विश्वबजारमा उपलब्ध हुने बितिक्कै नेपालमा ल्याउने गरी प्रक्रिया थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
अहिले विश्वका विभिन्न विकसित मुलुकहरूले कोरोनाभाइरसका लागि बनाइएका खोपको तेस्रो परीक्षण गरिरहेका छन्। तीमध्ये कुन प्राथमकितामा रहने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसै साता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले विश्वबजारमा उपलब्ध भएसँगै नेपालमा पनि आउँदो मार्च महिनासम्ममा आइपुग्ने बताएका थिए।
सरकारले गतसाता विदेशमा बनेका ती खोप र औषधि ल्याउने कानुनी बाटो खोल्नका लागि अध्यादेशसमेत जारी गरिसकेको छ।
अमेरिका, बेलायत, चीन, रुसलगायत विभिन्न विकसिकत मुलुकमा खोप अन्तिम चरण परीक्षण भइरहेका विवरणहरू आएका छन्।
खोप ल्याउनका लागि खोप बनिरहेका देशमा कूटनीतिक नोटसमेत पठाइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले बताए। "जुनजुन देशमा खोप बनिरहेको छ ती सबै देशलाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ," उनले भने।
अहिले परीक्षणमा रहेका खोप १२ वर्ष उमेर माथिका लागि मात्रै हो। त्यसबाहेक जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई खोप ल्याउनका लागि ग्लोबल भ्याक्सिन अलाइन्स र विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन मिलेर कोभ्याक्स भन्ने अवस्था निर्धारण तय गरेका छन्।
उक्त कोभ्यासले नेपालजस्तो गरिब मुलुकलाई खोप किनेर लगाउने कि सहुलियतमा लगाउने भनेर करिब ६ महिना अगाडि नै सोधेको डाक्टर गौतमले बताए।
नेपालले सहुलियतमा जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत अर्थात्, ६० लाख डोज चाहिने बताएको र त्यसको जवाफमा 'उपलब्ध गराउने' भनेर करिब डेढ महिनाअगाडि नै प्रतिबद्धता सहितको जवाफ आइसकेको उनले बताए।
खोपको प्राथमिकता सूचीमा को?
जनसङ्ख्याको करिब ३ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतका अग्रमोर्चामा काम गर्ने पर्छन्। त्यसबाहेक ५५ वर्ष उमेर कटेका १७ प्रतिशत अर्थात् ५१ लाख रहेका छन्।
"कोभ्याक्सले खोप उपलब्ध गराएपछि पहिलो प्राथमिकतामा यो ६० लाख जनसङ्ख्या पर्छ," प्रवक्ता डाक्टर गौतमले भने।
बाँकी रहेको जनसङख्याका लागि खोप जुटाउन ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरेर त्यसै अनुसार विभिन्न दातृ निकायबाट रकम जुटाउने काम भइरहेको उनले बताए।
नेपाललाई कहाँ बनिरहेको खोप सुहाउँदो होला?
कतिपय देशले परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेका देशहरूबाट खोप किन्नका लागि प्रीबुक गरिसकेका खबरहरू आइरहेका छन्। तर नेपालको तर्फबाट भने त्यति धेरै पहलहरू नभएको बताइन्छ।
डाक्टर गौतम भने नेपालमा देखिएको भाइरसको प्रकृति अध्ययनका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) पनि अध्ययन सकेकोले त्यसका आधारमा पनि कहाँ बनेको खोप नेपाललाई ठिक हुन्छ भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याउनुपर्ने बताँछन्।
"पहिला त खोप नै बनिसकेको छैन। बनिसकेपछि पनि हामीलाई कहाँको सँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ, कति खर्चिलो हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन र भण्डारणको पक्ष हेरेर ल्याउँदा मार्च वा एप्रिल होला कि भन्ने छ," प्रवक्ता गौतमले भने।
अहिले खोप परीक्षण भइरहेका मुलुकहरूमा डिसेम्बर महिनाभित्र ती खोपहरू उपलब्ध हुने विवरणहरू आइरहेका छन्।
एनएचआरसीले कोरोनाभाइरसको आनुवंशिक संरचनाको अध्ययन गरिसकेको र त्यसको निष्कर्षले नेपालीको भाइरस भारत र साउदी अरेबियामा देखिएको प्रकृतिसँग मिल्दोजुल्दो रहेको देखिएको जनाएको छ।
उक्त प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्न लागिएको बताउँदै एनएचआरसीका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ज्ञवालीले नेपालमा कस्तो खोप ठिक हुन्छ भन्ने सुझाव दिनका लागि थप नमुना लिएर नियमित आनुवंशिक संरचनाको अध्ययन गरिनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले खोप ल्याउनका लागि गृहकार्य गरिरहेका बेला अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कहाँ कसले बनाइरहेको खोप नेपालका लागि ठिक होला?
पाटन अस्पतालमा कार्यरत तथा औषधि विज्ञानबारे अनुसन्धान गर्दै आएका चिकित्सक बुद्ध बस्नेत भन्छन्, "चीनले एक/दुई दिनमै खोपको पछिल्लो विवरण दिन्छ होला। मलाई चाहिँ त्यो खोप र अक्सफर्डले बनाएको र भारतको सीरम इन्स्टिट्यूटले धेरै अगाडि उत्पादन थालेको खोप नेपाललाई ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ।"
बस्नेत अक्सफर्ड विश्वविद्यालय क्लिनिकल रिसर्च युनिट नेपालका निर्देशकसमेत हुन्।यो समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।
मंसिर १३, २०७७ शनिवार १५:४६:३८ बजे : प्रकाशित
काठमाडौँमा आज यो वर्षकै बढी चिसो महसुस
काठमाडौँ - काठमाडौँमा आज यो वर्षकै बढी चिसो गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज काठमाडौँको तापक्रम यो वर्षकै कम मापन गरिएको छ । विभागका अनुसार आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम ४.५ डिग्री सेल्सियसमा झरेको हो ।
यसअघि शुक्रबार ८.५ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो । केही दिनयता पश्चिमी वायुको प्रभावले बदली रहेको मौसम रातिदेखि सफा भएसँगै तापक्रम घटेको मौसमविद् वरुण पौडेलले बताउनुभयो । “राति मौसम सफा भए बिहानको तापक्रम घट्छ, राति बादल लागे बिहानको तापक्रम बढ्छ”, मौसमविद् पौडेलले भन्नुभयो । तापक्रम घटेसँगै बढी चिसो महसुस गरिएको छ । अबको केही दिन देशभरको मौसम सफा भई घाम लाग्ने बताइएको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ४.५ डिग्री र अधिकतम तापक्रम १८.५ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम माइनस २.५ डिग्री र सबैभन्दा धेरै विराटनगरको न्यूनतम तापक्रम १२ दशमलव शुन्य डिग्री सेल्सियस रहेको छ । रासस
मंसिर १३, २०७७ शनिवार १४:५१:३० बजे : प्रकाशित